Hazakaza-piarakodia - « Tour de Tana » :: Hiatrika dingana manokana folo ireo mpifaninana • AoRaha
Hazakaza-piarakodia – « Tour de Tana » Hiatrika dingana manokana folo ireo mpifaninana
Hianoka ny hazakaza-piarakodia ny mponin’Antananarivo raha afaka roa herinandro. Fifaninanana karakarain’ny klioba Asa Tana no hatao amin’ny 14 sy 15 septambra ho avy izao, tafiditra amin’ny dingana fahenina amin’ny fiadiana ny ho tompondan’i Madagascar amin’ny taranja hazakaza-piarakodia. Nampahafantarina teny amin’ny Sodirex Ankorondrano omaly ireo dingana manokana miisa folo ao anatin’ny halaviran-dalana 101, 5 km izay hiandry ireo mpanamory. Hiatrika ireo dingana manokana efatra ireo mpihazakazaka, ny sabotsy. Amin’ny alahady kosa ireo ambiny.
Hisedra ny halaviran-dalana 330,39 km ireo mpihazakazaka miaraka amin’ny lalana tsy maintsy andalavona mirefy 228,89 km. Hanainga eny amin’ny Sodirex Ankorondrano avokoa ireo mpanamory. Hitohy eny Mahitsy amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny ny lalana. Hihazo ny lalam-pirenena fahatelo sy faharoa kosa avy eo.
Dingana fahenina sady alohan’ny farany izao fihaonana manaraka eto Antananarivo izao. Nahazo isa maro indrindra hatramin’izao Randrianarivony Rivo sy Randrianarivony Ando miaraka amin’ny fiara Subaru Impreza R4.
Baolina kitra – Can 2021 Mety hiverina amin’ny septambra ny fifanintsanana
Kitra – » Orange Pro League » Miankina amin’ny CAF ny famaranana ny taom-pilalaovana
Basket-ball Mety hiverina amin’ny septambra ny fifanintsanana
Lalao afrikanina :: Nihemotra toerana iray ny filaharan’i Madagasikara